Toeram-pivarotana masinina servo maotera iray mandeha ho azy iray mandeha ho azy
Ny masinina iray manontolo dia mivondrona amina rafitra ara-materialy, mamolavola, fantsom-pandrefesana, fantsom-pifandraisana ary faritra hafa. Ny masinina mandeha ho azy dia tsy afaka mamokatra sarontava tarehy azo esorina fotsiny fa tsy saron-tava N95 sy stereo. Na ara-pitsaboana ilay sarontava na tsia dia tsy misy ifandraisany amin'ilay masinina. Raha mbola voadio ny maska ​​dia azo ampiasaina amin'ny sarontava fandidiana ilay sarontava novokarin'ity fitaovana ity.
Masinina misaron-tava ho an'ny ankizy
Ny maska ​​feno ho an'ny ankizy feno ao anaty masinina iray dia karazana fitaovana vaovao novolavolaina ho an'ny mpanjifa mba hamokarana sarontava sarimihetsika Japoney. Mampiasa 1 ~ 4 sosona PP spunbonded lamba tsy tenona, karbonina ary fitaovana fanivanana ho fitaovana famahanana. Ny sarontava dia vita amin'ny teknolojia ultrasonika. Ny sarontava dia manana embossing mazava, welding mafy ary hafainganam-pandeha, izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fahombiazan'ny vokatra. Ny endrik'ilay sarontava dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny fitsapana eoropeanina sy amerikanina, ary miasa ho azy tanteraka. Ny masinina iray manontolo dia misy endriny ara-materialy, mamorona, milina fantsom-bozaka, milina fanitso ary faritra hafa. Ny masinina fanaovana maska ​​ho an'ny ankizy mandeha ho azy dia tsy afaka mamokatra saron-tava azo ampiasaina fotsiny, fa tsy saron-tava N95 sy stereo.
Function sy toetra mampiavaka ny masinina saron-trondro
Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny masinina saron-trondro miendrika trondro dia novokarina tamim-pahombiazana tany Shina ary novidina tamin'ny tsena ivelany, mandeha ho azy ny masinina. Izy io dia azo ampiasaina hanamboarana emboss, hampiforitra, hikapohana ary hanapahana ny sarontava indray mandeha, ny fizotran'ny famokarana manokana dia manome antoka ny tsipika mazava ary tsy simba amin'ny famokarana, izay afaka mampihena be ny fako ara-nofo ary miantoka tsara ny kalitaon'ny sarontava novokarina
Masinina sarom-bava gana
Masinina Duckbill masinina dia milina izay mampiasa toro lalana lasitra tsy misy fangarony ultrasonic mba hamokarana sarontava endrika gana izay mety amin'ny indostrian'ny fandotoana avo. Izy io dia manana automatique avo lenta. Izy io dia manana tsipika tokana manomboka amin'ny famahanana ka hatramin'ny vokatra vita. Manana famahanana otrikarena ny akora mahazatra, rafitra fampitana tsipika orona mahaleo tena, ary afaka mametaka ny tsipika orona amin'ny lamba tsy voatenona ho azy, aforeto mandeha ho azy ary manapaka vokatra vita, ny vokatra novokarin'ny masinina makirana gana dia manana endrika tsara tarehy, fahombiazana azo antoka, vokatra avo, tahan'ny kilema ambany ary fandidiana mora.
Masinina saron'ny lolo
Ny milina saron-tsoavaly lolo automatique dia karazana fitaovana vaovao novolavolaina hamaly ny filan'ny mpanjifa; 2 ~ 6 sosona ny PP tsy namboarina tenona, karbaona mihetsiketsika sy fitaovana fanivanana no ampiasaina ho fitaovana famahanana (mifanaraka amin'ny vokatra fanivanana ny akora, N95, FFP2 ary fenitra hafa azo tratra)
Telon-tsofina elastika mifangaro miorina amin'ny masinina masinina fiaramanidina azo ampiasaina amin'ny masinina masinina
Ny masinina fiaramanidina elastika dia mety amin'ny famokarana mandeha ho azy ny saron-tava fiaramanidina Ny tsipika famokarana masinina masinina fiarovan-tratra dia ampiasaina amin'ny famokarana automatique ny maska ​​fiaramanidina. Izany dia ahitana indrindra ny horonana lamba manontolo aorian'ny famahanana, ny fonosana amin'ny sisiny, ny fisorohana ny orona, ny fikororohana, ny fanapahana ny fehikibo ary ny fampifangaroana, ary ny fanapahana vokatra vita. Ny sarontava vita dia vokarin'ny sehatra mpampita. Ny lamba elastika dia ampiasaina ho akora ilaina amin'ny tadin'ny sofina, izay namboarin-tena ary niraikitra tamin'ny vatana, mba hanatsarana ny kalitaon'ny sarontava. Miaraka amin'ny onjam-peo ultrasonic, dia afaka mampiasa onja eo noho eo handefasana, hanapahana na hametahana fitaovana haingana, fanaraha-maso PLC, fampisehoana marin-toerana, fiasa tsotra sy fitehirizana asa, fahombiazan'ny famokarana avo.
Karazan-kaopy, masinina karazana masira semi-automatique masinina, masinina sarimihetsika semi-mandeha ho azy
Famoronana fanontam-pirinty mafana - masinina karazana kaopy mafana masinina fanontam-pirinty mafana, izay mampiasa ny fitsipiky ny fanerena mafana hamita ny famoronana saron-tava. Misy toerana enina miasa indroa ao anaty masinina iray, ary olona roa miasa miaraka.
Masinina haingam-pandeha haavo haingam-pandeha ho an'ny milina fanoratana
Ny tsipika famokarana saron-tava kn95 / N95 mandeha ho azy dia natao manokana ho an'ny indostrian'ny fandotoana avo sy ny indostrian'ny fitsaboana. Mety ho an'ny olon-dehibe, saron-jaza sy respirator misy valizy miaina. Ity fitaovana ity dia mampiasa fifehezana programa servo hamita ny famokarana mandeha ho azy, manomboka amin'ny akora (3 ~ 6 sosona) ka hatramin'ny vokatra vita, ny fandidiana mandeha ho azy; ny foto-kevitra famolavolana sy ny haitao dia matotra, afaka mamokatra saron-tava isan-karazany; ny vokatra vita manana fahombiazana avo, marina aforitra, tsara tarehy fantsona fantsom-bozaka, fihenjanana mafy, mandeha ho azy fandevina orona bar ary mandeha ho azy fanontana asa; ny fitaovana dia fanaraha-maso mandeha ho azy tanteraka, mandeha tsara ary mamokatra famokarana miorina.
Kitapo foil vita amin'ny alim-bolo vita amin'ny alim-bolo dia azo amboarina ao anaty kitapo fonosana sakafo fonosana fonosana kitapo alim-boaloboka madio
Ny sarimihetsika aluminium Clo65d madio dia sakana avo lenta sy fitaovana mahazaka puncture novolavolain'i neume. Ny vokatra dia manana ireto toetra manaraka ireto: volafotsy fotsy fisehoany, opaque, taratra, milina matanjaka toetra, avo anti-blasting fampisehoana, anti-puncture ranomaso fampisehoana, anti-static, sns.
Kitapo fantsom-borona nylon fanomezana mangarahara vary kitapo plastika sakafo vaovao mitazona kitapo fonosana plastika azo namboarina
Ny horonan-tsarimihetsika fantsona fh001 nylon dia karazana fitaovana mitambatra izay ampifandraisin'ny sarimihetsika BOPA mahazaka biaxial sy ny sarimihetsika CPE amin'ny alàlan'ny fizotran'ny maina. Izy io no fitaovana fako be mpampiasa indrindra ao Shina. Ity vokatra ity dia misy fiasa miady amin'ny static, effets évacuation tsara, mangarahara avo, permeability oxygen ambany, fahombiazan'ny proof-hamandoana, tanjaka avo lenta ary fanoherana ny puncture, famehezana hafanana mora, famehezana tsara ary fanoherana ny fahanterana.
Kitapo bubble fonosana, Lamba mena, Lamba matevina manohitra ny statika, Mpanamboatra sarontava, Masinina saron-tarehy, Masinina saron-tava iray Drag Drag,